Ciidanka Xoogga Dalka oo Alshabaab kala wareegay deegaanka Moqo-kori | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidanka Xoogga Dalka oo Alshabaab kala wareegay deegaanka Moqo-kori
Ciidanka Xoogga Dalka oo Alshabaab kala wareegay deegaanka Moqo-kori
Hiiraan(SNTV)- Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidanka Xoogga Dalka ay howlgal military kula wareegeen deegaanka Moqo-kori ee gobolkaasi,halkaasi oo dadku ay ku dhibaateyn jireen Maleeshiyada Alshabaab.
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa weerar qorsheysan ku qaaday deegaankaasi Moqo-kori oo khayaas ahaantii 40 KM u jira degmada Maxaas ee Gobolkaasi Hiiraan,iyagoo qasaarooyin gaarsiiyay maleeshiyaadkii Shabaab ee halkaasi fariisinka ku lahaa.
Wariyaheena Ibraahim Maxamed Geedi oo lahadlay Saraakiisha Ciidankaas howlgalka fuliyay ayaa waxay u sheegeen in Ciidanka Xoogga Dalka ay Alshabaab ka qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal oo halkaasi ay ku haysteen,kadib markii ay maleeshiyaadkii Shabaab isaga carareen halkaasi.
Howlgal kan lamid ah oo dhawaan lagu qaaday isla deegaankaasi ayaa Shabaab loogu qeystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac,iyadoo sidoo kale laga soo furtay hub.
Previous articleJaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway oo billowday dhaqaale uruurin
Next articleXaaladihii ugu dambeeyey fatahaadda webiga ee Baladweyn